Building Construction and Infrastructure: VBA for MEP Calculations
VBA for MEP Calculations
Application တွေထဲ မှာ Programming အမျိုးမျိုး သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဒီအထဲ မှာ သုံးတတ်ရင် အချိန်ကုန် သက်သာစေတဲ့ VBA (Visual Basics for Application) ကိုသုံးပြီး Engineering Formula Functions တွေ ရေးတာ ကို မိတ်ဆက်ပေး ဘို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
အဓိက သုံးမဲ့ နေရာ က တော့ spread sheet (Microsoft Excel) အတွက် ပါ။ တကယ်တော့ VBA က MS Offices တွေ၊ Web Script တွေ အတွက် သာ မက AutoCad ® မှာလည်း အသုံးပြုလို့ ကောင်းတဲ့ programming တစ်ခုပါ။ AutoCad ® ကိုသုံးတဲ့ သူတွေ အတွက် AutoLisp, vBA, Diesel, Script စတဲ့ programming အချို့ကို နားလည်ရင် ထပ်တလဲလဲ လုပ်ရတဲ့ process တွေ ကို အချိန်ကုန် သက်သာစွာ နဲ့ လုပ်ဆောင် နိုင်ပါတယ်။ ရှုတ်ရှုတ်ထွေးထွေး တွက်ချက်ဘို့ လိုအပ်တာတွေ၊ Trial and error Loop နဲ့တွက်ရတာတွေ အတွက်လည်း တစ်ကြိမ် စနစ်တကျ ခေါင်းရှုတ်ခံ လိုက်ရင် နောက်တစ်ခါ သုံးဘို့ အဆင်သင့် ဖြစ်စေပါမယ်။
Developing Programming Flowcharts for HVAC Air-Side Circular Duct Sizing Calculations (SI Units)
VBA Codes for Air Duct (SI Units)
Screenshots: Adding VBA Codes in Excel
Screenshots: Use of VBA Functions in Excel Worksheet
Html Color Coding by VBA
Programming Languages အလိုက် Detail အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ basic instructions အချို့ ကတော့ Languages တိုင်းလိုလို မှာပါဝင်နေတာ တွေ့ရပါမယ်။
Math / Operation : Perform basic mathematical operations like addition and multiplication.
ဒါတွေရဲ့ အခြေခံ တွေ ကို Algorithm (or) Pseudocode and Program Flow Chart တွေနဲ့ ပြလို့ ရပါတယ်။ Modular programming လို့ခေါ်တဲ့ Program အသေးလေး တွေ အပိုင်းလိုက် အကန့်လိုက် အစိတ်စိတ် သီးခြားခွဲ ရေးပြီး မှ ပေါင်းစပ် သုံးတဲ့ အခါ ရေးရတာရော၊ debug လုပ်ရတာရော လွယ်ကူလာပါတယ်။
Program ရေးတဲ့ အခါ စနစ် တကျ Planning လုပ်ထားခဲ့ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် အမှားရှာရ ပြင်ရ စတဲ့ Debugging လုပ်ရတာ က ရေးရတာထက် အဆပေါင်း များစွာ ပိုခက်စေရုံ သာမက Crush ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာ တွေကိုပါ ထပ်ရှင်း နေရပါလိမ့် အုံးမယ်။
Programming Flowchart နဲ့ ပတ်သက်ပြီး http://www.nos.org/htm/basic2.htm မှာ သွား ရောက် လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။ အဓိက သိသင့်တာ ကတော့
Start / End : အစ နဲ့ အဆုံး (Programming တိုင်းမှာ အစ (Start) နဲ့ အဆုံး (End) ပါဝင်ရပါမယ်။) သူ့ရဲ့ ပုံက ထောင့်ကို လုံးထားတဲ့ စတုဂံ ပုံပါ။
Process : Computational steps or processing function ofaprogram၊ ပုံက ရိုးရိုး စတုဂံပုံပါ။
Decision Making and Branching၊ ရွမ်းဗတ် ပုံ။
...Back to Top ....
Excel အတွက် VBA Application ကိုလေ့လာတဲ့ အခါ သိသင့်တာတွေ ကတော့၊
VB for Excel Application
Files (personal.xls or add-in ".xla", Newer version ".xlsx")
Excel VBA Object Model: Excel, Word, AutoCad ® သာမက VBA သုံးနိုင်တဲ့ Applications တွေ မှာ Object Model တွေရှိပါတယ်။ ဒါမှ VBA ကနေ လုပ်ဆောင်ရမဲ့၊ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ကို ရှာဖွေ နိုင်ဘို့ပါ။
Function and Sub: Sub ဆိုတာ ကတော့ macro အနေနဲ့ တိုက်ရိုက် run လို့ရတဲ့ processes တွေပါ။ ပါဝင်တဲ့ နည်းလမ်း အချို့ ကို modify လုပ်ဘို့ လိုတဲ့ အခါ macro record လုပ်ပြီး မှီငြမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Form တွေပါ ဒီဇိုင်းလုပ်ပြီး Graphical User Interface နဲ့ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ အခုတင်ပြမှာ ကတော့ ဒီ Sub အကြောင်း မဟုတ်ပါဘူး။ Excel Spread Sheet ထဲမှာ Function အနေနဲ့ တိုက်ရိုက် Insert လုပ် သုံးနိုင်မဲ့ Function တွေအကြောင်းပါ။
Cold Air Standard အတွက် သုံးရမဲ့ Duct အရွယ်အစား ရွေးချယ်တဲ့ နည်းပါ။ ဒီနည်း နဲ့ Pressure Loss ကို တွက်ထုတ် ရင် ရမဲ့ Duct Pressure Loss အဖြေက ± 5% အတွင်းမှာ ရှိပါတယ်။ သူ့ကို သုံးနိုင်တဲ့ Conditions တွေကတော့။
Elevation:0to 500m
Duct Pressure: -5 to5kPa relative to ambient pressure
ဒီ အခြေအနေ တွေ က ပုံမှန် HVAC အတွက် လုံလောက်ပါတယ်။
အများအားဖြင့် Constraints နှစ်ခုရှိပါတယ်။ Velocity နဲ့ Friction Loss ပါ။ ဒါကြောင့် Duct Size လုပ်တဲ့ အခါ Velocity ကိုပဲ သုံးရင် မှားတတ်ပါတယ်။
Velocity Limits တွေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး Basic Duct Sizing Consideration တွေကို M&E Basics: Pipe & Duct Sizing မှာလေ့လာပါ။ (မှတ်ချက်၊ ၊ Ducting နဲ့ Piping ကို သီးသန့်ပြန်ခွဲ ဘို့ စီစဉ်နေပါတယ်။)
ပထမဆုံး Circular Duct Size ကို တွက်ဘို့ Function ကိုရေးရပါမယ်။
အသုံးပြုမဲ့ Calculation Formulae တွေကို တော့ ASHRAE Handbook: Fundamental ထဲကနေ မှီငြမ်းထားပါတယ်။
တွက်နည်း အဆင့်ဆင့် ကတော့၊
သတ်မှတ်ထားတဲ့ Velocity အတွင်းဝင်တဲ့ Duct Size ကိုတွက်မယ်။
ဒီ Duct Size နဲ့ တွက်ရင် ရမဲ့ Pressure Loss ကိုတွက်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ Limit အတွင်းရှိမရှိ ကြည့်မယ်။ ဝင်နေတယ် ဆိုရင် အဖြေရပါပြီ။
Limit အတွင်း မဟုတ်သေး ရင်တော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Pressure Loss Limit အတွင်း မဝင်မချင်း Duct Size ကိုပြန်ရွေး၊ ပြန်တွက် လုပ်ရပါမယ်။
ဒီ Function ကိုရေးတဲ့ အခါ တွက်ရ ပိုပြီးလွယ် ကူအောင် အကူ Functions ခွဲနှစ်ခု ပါ ထည့်ရေးထားပါတယ်။ ဒီ Functions သုံးခု ပေါင်းမှ အလုပ် လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
DuctSize_Cir_mm : Circular Duct Size ကို တွက်ထုတ်ဘို့ပါ။
DuctFrictionLoss_Pa: Circular Duct Frictioin Loss ကို တွက်ထုတ်ဘို့ပါ။
f_Colebrook: Colebrook's Friction Factor ကို တွက်ထုတ်ဘို့ပါ။
Flowcharts တွေ ကို ရေးမယ်ဆိုရင် ဒီလိုတွေ့ရပါမယ်။
Circular Duct မဟုတ်တဲ့ အခြား Duct တွေ ကို သုံးတဲ့ အခါ အသင့်တော်ဆုံး ကတော့ Equivalent Circular Duct ကိုရှာပြီး တွက်တဲ့ နည်းပါ။
HVAC Air-Side မှာသုံးလေ့ ရှိတဲ့ Air Duct အမျိုးအစား သုံးခု နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Conversion Formula တွေ ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီ Conversion Formula တွေ ကို အသုံးချထားတဲ့ VBA Code တွေကိုပါ ထည့်သွင်း ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ တွက်နည်း တွေ ကို Numerical Programming နဲ့တွက်ဘို့ VBA Code ကို ရေးရပါတယ်။ Excel ထဲက Visual Basic Editor အောက်မှာပါ။ သီးသန့် ".xla" အဖြစ်နဲ့ ထားပြီး Excel အစမှာ တက်ဘို့ ထားထားတဲ့ XLStart ဆိုတဲ့ Folder ကိုရှာပြီး ထည့်ချင်ထည့်၊ “personal.xls” ဆိုတဲ့ File ထဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထားလို့ရပါတယ်။
VBA က Macro Security Level ပေါ်မူတည် ပြီး အလုပ်လုပ်ခွင့် ပေးရပါတယ်။ Powerful Operation တွေမို့ Macro Security အကြောင်းကို သေသေချာချာ လေ့လာ သိရှိထားဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
"personal.xls" ဆိုတာ မရှိသေးရင်တော့ ပထမ Record New Macro လုပ်၊ စာတစ်လုံး နှစ်လုံးရိုက်၊ ဟိုနှိပ်ဒီနှိပ် လုပ်ပြီး Stop Macro ကိုနှိပ်၊ ပြီးလို့ Visual Basic Editor ကို ဖွင့်လိုက်ရင် "personal.xls" တက်လာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အောက်ဆုံး ပိုင်း မှာ Excel 2003 နဲ့ Excel 2007 က Screenshots အချို့ကို ထည့်သွင်း ပေးထားပါတယ်။
Air Duct Sizing တွက်ချက်ရမှာ သုံးနိုင်ဘို့ အတွက် VBA Functions တွေ ကို ရေးထား ပေးပါတယ်။ ရေးထားတဲ့ Functions တွေ ကတော့။
DuctSize_Cir_mm(Air_cmh, Optional dP_Pa = 1, Optional V_mps = 8, Optional e_mm = 0.09)
Circular Duct Size ကို တွက်ထုတ်ဘို့ပါ။
DuctFrictionLoss_Pa(Air_cmh, DuctDia_mm, Optional e_mm = 0.09)
Circular Duct Frictioin Loss ကို တွက်ထုတ်ဘို့ပါ။
Colebrook's Friction Factor ကို တွက်ထုတ်ဘို့ပါ။
Rectangular Duct ရဲ့ Equivalent Circular Duct Diameter ကို ရှာပေးမဲ့ Function ဖြစ်ပါတယ်။
Oval Duct ရဲ့ Equivalent Circular Duct Diameter ကို ရှာပေးမဲ့ Function ဖြစ်ပါတယ်။
DuctC2R(dD, Optional dH = 0)
Circular Duct တစ်ခု ရဲ့ Equivalent Rectangular Duct Dimension ကို ရှာပေးမဲ့ Function ဖြစ်ပါတယ်။ dH=0 ထားရင် Square Duct ကို ရှာပေးပါလိမ့်မယ်။
DuctC2O_Width(dD, Optional dH = 0)
Circular Duct တစ်ခု ရဲ့ Equivalent Oval Duct Dimension ကို ရှာပေးမဲ့ Function ဖြစ်ပါတယ်။ dH=0 ထားရင်တော့ Square duct ကို round Duct ရံထားတဲ့ အရွယ်အစား ကို ရရှိပါမယ်။ ( ie,a=2*b)
Function DuctAirFlow_Cir_cmh(dD_mm, Optional dP_Pa = 1, Optional dV_mps = 9, Optional e_mm = 0.09)
Circular Duct တစ်ခုရဲ့ Allowable Air Flow (cmh) ကို တွက်ထုတ်ဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။
DuctAirFlow_Rec_cmh(dW_mm, dH_mm, Optional dP_Pa = 1, Optional dV_mps = 9, Optional e_mm = 0.09)
Rectangular Duct တစ်ခုရဲ့ Allowable Air Flow (cmh) ကို တွက်ထုတ်ဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။
DuctAirFlow_Oval_cmh(dW_mm, dH_mm, Optional dP_Pa = 1, Optional dV_mps = 9, Optional e_mm = 0.09)
Oval Duct တစ်ခုရဲ့ Allowable Air Flow (cmh) ကို တွက်ထုတ်ဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Visual Basic Editor ကိုဖွင့်ပြီးတဲ့ အခါ VBAProject(PERSONAL.XLS) အောက်မှာ Module တစ်ခု ကို ထည့်သွင်းပြီး ကိုယ်နှစ်သက်သလို နာမည်ပေး ရပါမယ်။ e.g. AirDuct ပြီးရင် Code နေရာမှာ အောက်က VBA Codes တွေကို Copy & Paste လုပ်ဘို့ပါ။ (Screenshots: No.2 ကို မှီငြမ်း ကြည့်ပါ။)
'General Section Declaration
Option Base0'array base
Private Const atm As Double = 101.325 ' Atmospheric pressure in kPA
'Function No. 01: to calculate Circular Duct Size
Function DuctSize_Cir_mm(Air_cmh, Optional dP_Pa = 1, Optional V_mps = 8, Optional e_mm = 0.09)
'Calculate Circular Duct Size, Default for 1Pa/m, 8 m/s and Medium Surface Roughness 0.09mm
Dim dV As Double, dD As Double, dA As Double
'calc Area which satisfy the velocity limits
dV = V_mps
dA = Air_cmh / (3600# * dV)
dD = (4 * dA / pi) ^ 0.5 * 1000
'call function for Friction Loss
dP = DuctFrictionLoss_Pa(Air_cmh, dD, e_mm)
If dP > dP_Pa Then
'Use Power rule estimation for iteration
dD = dD * (dP / dP_Pa) ^ 0.25
'exit error 1%
If Abs((dP - dP_Pa) / dP_Pa) < 0.01 Then Exit Do
DuctSize_Cir_mm = dD
'Function No. 02: to calculate duct friction loss
Function DuctFrictionLoss_Pa(Air_cmh, DuctDia_mm, Optional e_mm = 0.09)
'Calculate Friction Loss
Dim dQ As Double, dD As Double 'flowrate (m3/s), diameter(mm)
Dim dV As Double, dF As Double 'velocity (m/s), friction factor
Dim dM As Double, dE As Double 'density (kg/m3), surface roughness
Dim Re As Double, dA As Double
'For Cold Air Standard at density=1.2kg/m3
If Air_cmh * DuctDia_mm >0Then
dQ = Air_cmh / 3600# 'convert air flowrate to m3/s
dD = DuctDia_mm
dM = 1.2 'kg/m3 for cold air std
dA = 0.25 * pi * (dD / 1000#) ^ 2
dV = dQ / dA 'v=Q/A
Re = 66.4 * dD * dV 'Ref ASHRAE: or use Re = V *d/ nu
dF = f_Colebrook(e_mm / dD, Re)
DuctFrictionLoss_Pa = 500 * dF * dM * dV * dV / dD
DuctFrictionLoss_Pa = 0
'Function No. 03: to calculate Colebrook Friction Factor
Function f_Colebrook(e_by_D, Re) 'e_by_D Relative roughness; Dh: Hydraulic Dia, Re: Reynold number
'Calculate Colebrook friction Factor
DimfAs Double, root_f As Double, root_f1 As Double
'Start with Tsal's estimation
f = 0.11 * (e_by_D + 68 / Re) ^ 0.25
Iff< 0.018 Then
f = 0.85 *f+ 0.0028
root_f =f^ 0.5
root_f1 = -0.5 * Log(10) / Log(e_by_D / 3.7 + 2.51 / (root_f * Re))
'check if error is less than 0.5%
If Abs((root_f1 - root_f) / root_f) < 0.005 Then Exit Do
root_f = 0.5 * (root_f + root_f1) 'Use binary approach iteration
f_Colebrook = root_f ^ 2
'Function No. 04: Equivalent Circular Duct Size ofaRectangular Duct
Function DuctR2C(dH, dW) As Double
'Rectangular Duct to Circular Duct
If dW * dH >0Then
DuctR2C = 1.3 * ((dH * dW) ^ 0.625) / ((dH + dW) ^ 0.25)
DuctR2C = 0
'Function No. 05: Equivalent Circular Duct Size of an Oval Duct
Function DuctO2C(dH, dW) As Double
'Oval Duct to Circular Duct
Dim dA As Double, P As Double
dA = (pi * dH ^2/ 4) + dH * (dW - dH)
P = pi * dH +2* (dW - dH)
DuctO2C = 1.55 * (dA ^ 0.625) / (P ^ 0.25)
DuctO2C = 0
'Function No. 06: Equivalent Rectangular Duct Dimension ofaCircular Duct
Function DuctC2R(dD, Optional dH = 0) As Double
'Circular Duct to Rectangular Duct
'if Dimension (dH) is zero, square duct
'dH could be either dimension: "Width" or "Height"
Dim dW As Double, dW1 As Double
Dim dD1 As Double
If dH >0Then
dW = 0.25 * pi * dD * dD / dH
dD1 = 1.3 * ((dH * dW) ^ 0.625) / ((dH + dW) ^ 0.25)
dW = dW * (dD / dD1) ^ 2
If Abs((dD1 - dD) / dD) < 0.005 Then Exit Do
dW = dD * 0.9148
DuctC2R = dW
'Function No. 07: Equivalent Oval Duct Dimension ofaCircular Duct
Function DuctC2O_Width(dD, Optional dH = 0) As Double
'if Dimension (dH) is zero, square duct + round, ie,a=2* b
'dH is dimensionbfor "Height", dW is dimensionafor "Width"
'As nature, dH < dD
dW = 0.25 * pi * (dD * dD - dH * dH) / dH
dD1 = 1.55 * (dA ^ 0.625) / (P ^ 0.25)
dW = dD / 1.5234
DuctC2O_Width = dW
'Function No. 08: To Calculate Allowable Air Flow fromaCircular Duct.
Dim cmh As Double, dP As Double
Dim dD As Double, dV As Double
dV = dV_mps
dD = dD_mm
cmh = 0.0009 * pi * dD * dD * dV '0.0009 <- 0.25*3600/1000000
dP = DuctFrictionLoss_Pa(cmh, dD, e_mm)
dV = dV * (dP_Pa / dP) ^ 0.5
cmh = 0.0009 * pi * dD * dD * dV
If Abs(dP - dP_Pa) / dP_Pa < 0.01 Then Exit Do
DuctAirFlow_Cir_cmh = cmh
'Function No. 09: To Calculate Allowable Air Flow fromaRectangular Duct.
Function DuctAirFlow_Rec_cmh(dW_mm, dH_mm, Optional dP_Pa = 1, Optional dV_mps = 9, Optional e_mm = 0.09)
dD = DuctR2C(dW_mm, dH_mm)
DuctAirFlow_Rec_cmh = DuctAirFlow_Cir_cmh(dD, dP_Pa, dV_mps, e_mm)
'Function No. 10: To Calculate Allowable Air Flow from an Oval Duct.
Function DuctAirFlow_Oval_cmh(dW_mm, dH_mm, Optional dP_Pa = 1, Optional dV_mps = 9, Optional e_mm = 0.09)
dD = DuctO2C(dW_mm, dH_mm)
DuctAirFlow_Oval_cmh = DuctAirFlow_Cir_cmh(dD, dP_Pa, dV_mps, e_mm)
Excel 2002-2003 (or Earlier)
Screenshot No. 1: နမူနာ အနေနဲ့ Microsoft Excel 2002-2003 မှာဆိုရင်တော့ ဒီလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Screenshot No. 2: Visual Basic Editor ဆိုတာ ကို နှိပ်လိုက်ရင် အောက်က ပုံစံ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အထဲမှာ VBA Code တွေ ကို ကူးယူပြီးရင် ဒီလို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Screenshot No. 3: 2007 အထက် ဆိုရင်တော့ Tools အစား Developer Tab အနေနဲ့ ဝင်လာပါတယ်။
Screenshot No. 4: တစ်ခါတစ်ရံ Developer Tab ကို ဖျောက် ထားတတ်ပါသေးတယ်။ ဒါဆိုရင် တော့ excel option အောက်ကနေ သွားရှာ ရပါလိမ့်မယ်။ (မသေချာ ရင် Help မှာ ရှာကြည့်ပါ။)
Screenshot No. 5:
အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း VBA က Macro Security Level ပေါ်မူတည် ပြီး အလုပ်လုပ်ခွင့် ပေးရပါတယ်။ Powerful Operation တွေမို့ Macro Security အကြောင်းကို သေသေချာချာ လေ့လာ သိရှိထားဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Screenshot No. 6:
Screenshot No. 7:Developer Tab အောက် က Code နေရာ မှာ လည်း Macro Security ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ထွက်လာမဲ့ Screen ကတော့။
ပြီးရင်တော့ ဒီ Function တွေကို Excel Spreadsheet မှာ အသင့်သုံးနိုင်ပါပြီ။
ပထမ Insert function ကိုသွားပြီး selectacategory မှာ User Defined ကိုရွေးလိုက်ရင် ဒီ Function တွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ပြီးရင်တော့ Excel Formula သုံးနေကျ အတိုင်းသုံးရုံပါပဲ။
ဒီအထဲ မှာ Air_cmh ဆိုတဲ့ ကွက်လပ်ကိုတော့ ဖြည့်ကို ဖြည့်ရပါမယ်။ အခြား ကွက်လပ်တွေ ကို Function မှာထဲ က Optional အနေနဲ့ ရွေးပြီး Assign လုပ်ထားတာမို့ မဖြည့်လည်း ရပါတယ်။ Assigned လုပ်ခဲ့တဲ့ value တွေကတော့ အသုံးများတဲ့
dP_Pa = 1
V_mps = 8
E_mm = 0.09
ပြီး Excel Style: Drag-Coppy လုပ်လိုက်ရင် ရမဲ့ အဖြေကတော့၊
ဒီကရတဲ့ အဖြေက Chart ကနေကြည့်လို့ ရတဲ့ အဖြေနဲ့ အတူတူလောက်ပါပဲ။ တကယ် အသေးစိတ် တွက်လို့ ရမဲ့ အဖြေရဲ့ ± 1% အတွင်းမှာ ရှိတာမို့ safety factor ထည့်ယူလေ့ရှိတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ တွေအတွက် လုံလောက်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ Excel Calculation Sheet File တွေ ကို အခြားသူတွေ ဆီ ပို့ပေးရတဲ့ အခါမှာတော့ ဒီ Function VBA Codes တွေ အဲဒီ file ထဲမှာ မပါရင် အလုပ်လုပ် မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရှင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ Function VBA Codes တွေ ထည့်မပေး ပဲ Function တွေ နဲ့တွက် ပြီး ရလာတဲ့ အဖြေ ရှိတဲ့ Cell တွေက အဖြေ ကို Copy ကူး၊ ပြီး Paste Special မှာ values ကို ရွေးပြီး ပြန်ထည့်လိုက်ပါ။ Chart ကြည့်ပြီး Manually ရိုက်ထည့် ထားသလို မျိုးပေါ့။
အပေါ်က VBA code တွေမှာ အရောင်တွေ ခွဲပေးထားတာ က လည်း VBA ကို သုံးပြီး html format ကို ပေးထားလို့ပါ။ ဒါကိုတော့ MS Word အောက်မှာ ရေးပြီးသုံးပါတယ်။ အပို သိပ်မပါပဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရအောင် format လုပ်ဘို့က html မှာ သိပ် မလွယ်ကူ လှပါဘူး။ အချိန်လည်း အရမ်းကုန်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ VBA Code ကိုတော့ ရှုတ်ထွေးတာ မို့ မဖော်ပြတော့ပါဘူး။
Using Flow Chart - Flowcharting[ http://www.nos.org/htm/basic2.htm ]
HVAC Duct Sizing[ http://chawlwin.blogspot.com/2009/07/hvac-duct-sizing.html ]
Programming နဲ့ သုံးလို့ရတယ် ဆိုတာ ကို မိတ်ဆက် ပေးချင် လို့ပါ။ ပြီးတော့ အချိန်ကုန် သက်သာ စေချင်တာလည်း ပါပါတယ်။
အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားထားပေမဲ့ အမှား လုံးဝကင်းပါတယ် လို့ အာမ မခံနိုင်ပါဘူး။ စာဖတ်သူ ကိုယ်တိုင် သုံးစွဲပြီး ကြည့်ပြီး အဖြေမှန် ပေးနိုင်ကြောင်း သေချာမှ သုံးစွဲပါလို့ အသိပေး လိုပါတယ်။
Posted by Ko Chaw - ကိုချော at 8:53 AM Labels: HVAC, MEP Design, VBA